>နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ်ထားပြန် | Myanmar Collection
← >ဗီယက်နမ် အာဏာရ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သဘောထား ပျော့ပြောင်းသူ တစ်ဦးအား ရွေးချယ်တင်မြှောက်
>မြန်မာ မော်ဒယ်မလေးများရဲ့ တက်တူး ဖက်ရှင် →
>နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ်ထားပြန်
နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ် ထားပြန်
လွတ်လပ်ရေး နေ့ ကို အမှတ် ရစေသောအားဖြင့် လွတ်လပ်ရေး နေ့ တွင် မင်္ဂလာ ဆောင်မှု၊ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကို “စိန်စီသောည” ကြီးကျယ်စွာ လုပ်မှုများကြောင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် မှာ ဆုမရှိ ခဲ့ဟု အင်တာနက် လူငယ် ကွန်ယက် ဖိုရမ်တွင် ဖော်ပြထား သည်။ ပုံတွင် ကြိုးကြာ တောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားမှ သရုပ်ဆောင် နှစ်ဦး ကို တွေ့ ရစဉ်
မြန်မာရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ဖြစ်သည့် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ ကို ယနေ့ နေပြည်တော် လေဟာပြင်ကဇာတ် ရုံ ၌် ကျင်းပရာ —
(၁) အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို သရုပ်ဆောင် နေတိုး က မိုးည အိပ်မက်မြူ ဇာတ်ကား ဖြင့် ရရှိပြီး
(၂) အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် က မိုးညအိမ်မက်မြူ ဇာတ်ကား ဖြင့် ပင်ရရှိ သည်။
(၃) အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား ကို ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်၏ ဆေးပညာလောက နောက်ခံ ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားမှ ရရှိပြီး
(၄) အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကို ဒါရိုက်တာ မီးပွားက – ဇော်က ကနေသည် ဇာတ်ကား ဖြင့် ရရှိသည်။
ယခု နှစ် တွင် အမျိုး သမီး ဇာတ်ဆောင် ကို လည်း ဆက်လက် မပေး ဘဲ ထားရှိခြင်း ကြောင့် အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် ဆုရရှိ မည် ဟု တစ်ပြေး နေသည့် အိန္ဒြာ ကျော်ဇင်နှင့် မိုးဟေကို တို့ ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိ ဟု သိရသည်။
(၅) ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု ကို ဟံသာမြေကိုဇော်မင်း
(၆) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု -ကို မြင့်ဦးဦးမြင့် က ကြိုးကြာ တောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကား ၊
(၇) ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု ကို ကိုကိုဌေး က အတိတ် ရဲ့အရိပ် ဇာတ်ကား ဖြင့် ၎င်း
(၈) ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု -ကို ဓီရာမိုရ် က ဇော်က ကနေသည် ဇာတ်ကား ဖြင့် ၎င်း
(၉) ရုပ်ရှင်အသံဆု ကိုည ဆန်းဦး က အတိပ်ရဲ့အရိပ် ဇာတ်ကား ဖြင့် ပင် ၎င်း ရရှိခဲ့သည်။
ယခု နှစ် အကယဒမီ ဆုများ ကို ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ဇာတ်ကား ၁၆ ကား အနက်မှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Myanmar Motion Picture Academy Awards 2009 Presentation Ceremony was held on 23 January 2001 at Naypyidaw. Here is the list of Winners for Year 2009 Academy Awards;
The Best Lead Actor Award = Nay Toe (Moe Nya Eain Myat Phyu)
The Best Best Supporting Actress Award = Soe Pyae Thazin (Moe Nya Eain Myat Phyu)
The Best Sound Award = San Oo and Group (Shadows of the Past)
The Best Cinematography Award = Ko Ko Htay and Group ( Shadows of the Past)
The Best Best Screenplay Award = Myint Oo Oo Myint (Kyo Kyar Taung Pan Khat Than)
The Best Music Award = Di Yar Mo (Zaw Ka Ka Nay Thee)
The Best Best Picture/ Film Award = Kyo Kyar Taung Pan Khat Than
The Best Director Award = Director Mee Pwar (Zaw Ka Ka Nay Thee)
The Best Editing Award = Han Thar Myae Ko Zaw Min (Kyaut Sat Yay)
No Award for The best Supporting Actor Award and The Best Leading Actress Award.
This entry was posted in အနုပညာကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.
One response to “>နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ်ထားပြန်”
Myanmar Blogger Collection | January 24, 2011 at 1:44 PM | Reply
>၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန် အကယ်ဒမီဆု ရရှိကြသူများMyanmar Motion Picture Academy Awards 2009 Presentation Ceremony was held on 23 January 2001 at Naypyidaw. Here is the list of Winners for Year 2009 Academy Awards;The Best Lead Actor Award = Nay Toe (Moe Nya Eain Myat Phyu)The Best Best Supporting Actress Award = Soe Pyae Thazin (Moe Nya Eain Myat Phyu)The Best Sound Award = San Oo and Group (Shadows of the Past)The Best Cinematography Award = Ko Ko Htay and Group ( Shadows of the Past)The Best Best Screenplay Award = Myint Oo Oo Myint (Kyo Kyar Taung Pan Khat Than)The Best Music Award = Di Yar Mo (Zaw Ka Ka Nay Thee)The Best Best Picture/ Film Award = Kyo Kyar Taung Pan Khat ThanThe Best Director Award = Director Mee Pwar (Zaw Ka Ka Nay Thee)The Best Editing Award = Han Thar Myae Ko Zaw Min (Kyaut Sat Yay)No Award for The best Supporting Actor Award and The Best Leading Actress Award.